ဟောင်ကောင် - အများပိုင်သတင်း။ အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B Marketplace သတင်း
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 12, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 12, 2021 Doris Mkwaya	မှတ်ချက် Leave
ပြီးခဲ့သည့်သုံးလပတ်အတွင်း Disney ၏စွမ်းဆောင်ရည်သည်မမျှော်လင့်ဘဲအမြတ်အစွန်းရရှိခဲ့သည်။ ယခုဘဏ္fiscalာရေးနှစ်ပထမသုံးလပတ်တွင်၊ အမြတ်အစွန်းဒေါ်လာ ၁၇ သန်းရရှိခဲ့ပြီးတစ်နှစ်တစ်နှစ်ကျဆင်းမှု ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့သည်။ အထူးပစ္စည်းများနုတ်ယူပြီးနောက်ရှယ်ယာတစ်စုလျှင်အမြတ်မှာ ၃၂ ဆင့်ဖြစ်ပြီးစျေးကွက်၏ ၄၁ ဆင့်ဆုံးရှုံးမှုထက်ပိုကောင်းသည်။
အလီဘာဘာကိုလက်ဝါးကြီးအုပ်ထားမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု - Bluff or JustaStart?
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇန်နဝါရီလ 23, 2021 ဇန်နဝါရီလ 22, 2021 GNAF	မှတ်ချက် Leave
၂၀၂၀၊ ဒီဇင်ဘာလနှောင်းပိုင်းတွင်တရုတ်ပြည်စျေးကွက်စည်းမျဉ်းဥပဒေအုပ်ချုပ်ရေးကသူတို့စတင်ခဲ့ပြီဟုကြေငြာခဲ့သည် တရုတ်နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်သော Alibaba ကိုတရားစွဲဆိုမှု၎င်း၏“ ရွေးချယ်မှုတစ်ခုကိုရွေးချယ်” သည့်မူဝါဒသည်၎င်း၏ပြိုင်ဘက်များထံမှနှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်တန်းမှုများစွာရရှိခဲ့သည်။
“ Pick one” မူဝါဒသည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်အလီဘာဘာသည်အွန်လိုင်းဆိုင်ပိုင်ရှင်များကိုအတင်းအကျပ်ဖိအားပေးစေခဲ့သည် သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို run ဖို့တစ်နေရာတည်းသာရွေးချယ်ပါAlibaba ၏ကိုယ်ပိုင်ပလက်ဖောင်းများဖြစ်သော Tmall နှင့် Taobao တို့တွင်သူတို့ဆိုင်များကိုပိတ်ထားသည်ဖြစ်စေ၊ အခြားပလက်ဖောင်းများအားလုံး၊ အထူးသဖြင့်ထိုအချိန်တွင်ဒုတိယအကြီးဆုံးဖြစ်သော JD ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှစ၍ JD သည်အလီဘာဘာအား၎င်း၏မခိုင်လုံသောမူဝါဒအတွက်တရားစွဲခဲ့သည်။
ဇန်နဝါရီလ 20, 2021 ဇန်နဝါရီလ 19, 2021 Arslan Ishaq	မှတ်ချက် Leave
Xiaomi သည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးတရုတ်နိုင်ငံတွင်သူမတည်ထောင်နိုင်ခြင်းကိုနိုင်ငံတကာဈေးကွက်ကိုချဲ့ထွင်ခြင်းမပြုမီ“ Apple Apple” ဟုခေါ်ဆိုခဲ့သည်။
၁၀ နှစ်မပြည့်သော ၀ န်ဆောင်မှုဖြင့်လုပ်ငန်းရှင်များစွာကပူးတွဲတည်ထောင်ခဲ့သောအမှတ်တံဆိပ်သည်စမတ်ဖုန်းများအပါအဝင်ထုတ်ကုန်အမြောက်အမြားကိုအဓိကထားပြီးကြီးမားသောအလားအလာများကိုဆက်လက်မြှင့်တင်နေသည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇန်နဝါရီလ 20, 2021 ဇန်နဝါရီလ 20, 2021 GNAF	မှတ်ချက် Leave
Zheng Shuang ထူးခြားသည့်တီဗီဇာတ်လမ်းများတွင်သူမ၏အဓိကအခန်းကဏ္ thanks ကြောင့်တရုတ်၌ကျော်ကြားခဲ့သည် ဥက္ကာပျံကိုကြည့်ကြရအောင် ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင်သူသည်အခြားထင်ရှားသောအလုပ်များမရှိဘဲဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာကျော်ကြားခဲ့သောထိပ်တန်းအမျိုးသမီးများစာရင်းတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ သူမ၏လှပသောမျက်နှာနှင့်ရဲရင့်သောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကသူမကိုအတော်လေးရရှိခဲ့သည် အစွန်းရောက်ပန်ကာအခြေစိုက်စခန်းZheng သည်အဆိုးမြင်သတင်းများရှိသည့်အခါတိုင်းသူမအားအင်တာနက်ပေါ်မှအမြဲကာကွယ်ပေးသည်။ သို့သော်ဤအချိန်သည်ကွဲပြားခြားနားပါသည်။
ဗဟုသုတစိုးရိမ်ခြင်း - Paid Study Rooms များသည်တရုတ်ပြည်တွင်ရှင်သန်နိုင်သည်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇန်နဝါရီလ 12, 2021 ဇန်နဝါရီလ 11, 2021 GNAF	မှတ်ချက် Leave
Paid Study Rooms (PSRs) နှင့်ဆိုင်သောရိုးရာကဖီးများနှင့်မတူသည်မှာနာမည်က၎င်းသည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုဖော်ပြနေသည်။ ဤနေရာတွင်လူတို့သည်ကိုယ်ပိုင်လေ့လာမှုအတွက်ငွေပေးကြသည်။ သူတို့ထဲကအတော်များများဟာအိပ်မက်ထဲမှာပါသော Dream Runner, Dream Seeker သို့မဟုတ် Dream Builder စသည့်စကားလုံးများပါ ၀ င်သည်။ ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်အလုပ်ကြိုးစားသူကိုအလွန်အားပေးသောဤလူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် PSR သည်ခရီးစတင်ခဲ့သည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇန်နဝါရီလ 8, 2021 ဇန်နဝါရီလ 7, 2021 GNAF	မှတ်ချက် Leave
Jack Ma ဘယ်မှာလဲ။ တရုတ်ပြည်၏အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဘာဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးကအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကြီးထွားလာပြီးယခုနှစ်လကျော်ပျောက်ကွယ်သွားသည်။ အလီဘာဘာကိုတည်ထောင်သူ အာဖရိကမှာတောင်မှမပေါ်လာဘူး's Business Heroes အစီအစဉ်ကိုစီစဉ်ထားသည့်အတိုင်း Jack Ma Foundation မှထောက်ပံ့သောတီဗွီအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူ၏လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်ထင်မြင်ချက်များသည်တရုတ်နိုင်ငံ၌ပျံ့နှံ့နေသည်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇန်နဝါရီလ 5, 2021 ဇန်နဝါရီလ 4, 2021 GNAF	မှတ်ချက် Leave
နှစ်သစ်ကူးမတိုင်မီဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက်တွင် Zhang သည်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူအိမ်သို့လမ်းလျှောက်နေစဉ်ရုတ်တရက်စိတ်ပျက်သွားသည်။ သူမသည်ချက်ချင်းပင်ဒေသခံဆေးရုံသို့ပို့ခဲ့သည် Urumchi, သူမနေဆဲခြောက်နာရီအကြာကွယ်လွန်ခဲ့သည်.
ဒီအဖြစ်ဆိုးဟာဇန်န ၀ ါရီလ ၃ ရက်နေ့အထိအင်တာနက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့စွာပျံ့နှံ့နေတယ်။ နောက်တစ်နေ့မှာ Zhihu မှာလူတွေဟာနည်းပညာကုမ္ပဏီကြီး Pinduoduo ရဲ့တရားဝင်အကောင့်က post တစ်ခုရဲ့စခရင်ကိုစပြီးဖြန့်လိုက်တယ်။
ဟောင်ကောင် Jimmy Lai ကိုပြန်လည်ဖမ်းဆီး
ဇန်နဝါရီလ 1, 2021 ဇန်နဝါရီလ 1, 2021 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
ကြာသပတေးနေ့ကဟောင်ကောင်တရားရုံးကတစ်ကြိမ်ထပ်မံထုတ်ပြန်ခဲ့သည် စီးပွားရေးသမားဂျင်မီလိုင်ကိုဖမ်းဆီးမှုအာမခံဖြင့်အိမ်အကျယ်ချုပ်ချခံထားရသောတရုတ်ကိုအထူးဝေဖန်သူဖြစ်သည်။ လိုင်၏အမှုသည်နယ်မြေတရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုကိုစမ်းသပ်မှုအဖြစ်ရှုမြင်သောအမျိုးသားလုံခြုံရေးဥပဒေအသစ်ကိုဖောက်ဖျက်သည်ဟုစွပ်စွဲခံရသူတစ် ဦး ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်သည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဒီဇင်ဘာလတွင် 30, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 29, 2020 GNAF	မှတ်ချက် Leave
ချမ်းသာမလာခင်တရုတ်အိုလာမှာလား။ ဤသည်မှာတရုတ်နိုင်ငံနှင့်၎င်း၏ပြိုင်ဘက်များကမကြာခဏဆွေးနွေးလေ့ရှိသောအရေးကြီးသောမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အမျိုးသားရေးအာဏာဖြစ်သည်။ အဖြေအများစုအရ, ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့ပြီးသားဖြစ်ပျက်နေသည်။ ကနေစာရင်းအင်းများ စီအိုင်အေ တရုတ်သည်အမေရိကန်ကဲ့သို့ပျမ်းမျှအသက်အရွယ်ရှိကြောင်းပြသသည်။ တစ် ဦး ချင်းဝင်ငွေသည်သာမန်ဖွံ့ဖြိုးပြီး - နိုင်ငံ၏အဆင့်ထက်ဝက်မျှမဖွံ့ဖြိုးသေးသောဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံအတွက်နိမိတ်လက္ခဏာမဟုတ်ပါ။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဒီဇင်ဘာလတွင် 24, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 23, 2020 GNAF	1 မှတ်ချက်
Ding Zhen သည်တစ်ညတာကျော်ကြားလာခဲ့သည်။ နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်တွင်သူ၏ ၇- စက္ကန့်ဗီဒီယိုကို TikTok သို့တင်ခဲ့သည် သူကကင်မရာကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပြုံးပြသည်။ ၎င်းသည်လူမှုရေးပလက်ဖောင်းများစွာတွင်ပျံ့နှံ့သွားသည်။ အင်တာနက်အသုံးပြုသူများသည်သူ၏လှပသောမျက်နှာအသွင်အပြင်ကိုအလွန်နှစ်သက်ကြသည်။ ဒါပေမယ့်ဒီဇာတ်လမ်းဟာသူ့ဟာသူပျက်ပြားသွားအောင်ဘယ်သူမှကြိုတင်မခန့်မှန်းနိုင်ဘူး။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဒီဇင်ဘာလတွင် 16, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 15, 2020 GNAF	မှတ်ချက် Leave
ဒေသခံအုပ်စုများအွန်လိုင်းနေ့စဉ်ရောင်း ၀ ယ်ခြင်းများကိုစူးစမ်းလေ့လာသည့်အခါအသိုင်းအဝိုင်းအုပ်စု ၀ ယ်ခြင်း (CGB) ၏အယူအဆကို Changsha တွင် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့သည်။ တူညီသောလူနေအိမ်ခန်း၏အိမ်နီးချင်းများသည်ကြီးမားသောအမှာစာများပြုလုပ်ရန်အတူတူပါ ၀ င်နိုင်သည်။ စူပါမားကက်များသည်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းအမိန့်များကိုချက်ချင်းပို့ပေးလိမ့်မည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဒီဇင်ဘာလတွင် 14, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 13, 2020 GNAF	မှတ်ချက် Leave
"နောက် Bill Gates တစ်ယောက်ဟာပရိုဂရမ်မာကိုကလေးငယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့စတင်ပါ့မယ်။ "
မကြာသေးမီကတရုတ်နိုင်ငံမှပညာရေးကုမ္ပဏီများသည် ၄ ​​နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်များအတွက်ပရိုဂရမ်းမင်းသင်ခန်းစာများကိုပေးသည်။ ထိုကဲ့သို့သောသင်ခန်းစာများအတွက်ထားရှိရေး လိုအပ်သောပုံစံများကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့်စက်ရုပ်များနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ရန်အတွက်ကစားစရာလုပ်ကွက်များကိုအသုံးပြုခြင်း။ မိနစ် ၄၀ ကြာသင်ခန်းစာသည်ဒေါ်လာ ၁၅ ခန့်ကျသင့်ပြီးလေ့ကျင့်ခန်းအပြည့်အ ၀ တွင်သင်ခန်းစာ ၄၀ ကျော်ပါဝင်သည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဒီဇင်ဘာလတွင် 13, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 13, 2020 GNAF	မှတ်ချက် Leave
၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် Li Zhong ကသူ၏ဇနီး Kang Cuicui ကသူ့အားလိမ်လည်နေသည်ဟုသံသယရှိခဲ့သည်။ သူတို့မှာရန်ပွဲဖြစ်ခဲ့ကြပြီးကန်ကထွက်ပြေးခဲ့သည်။ သူမသည်ဟိုတယ်တစ်ခုသို့သွားပြီး၊ မေ့ဆေးမပါဘဲတစ် ဦး စူးရှအဆိပ်ပေါင်းသတ်ဆေး။ သူမ၏မိသားစုသည်ဒေါသထွက်ကာလီ၏မိဘများကသူမအားမိသားစုသင်္ချိုင်းများ၌သင်္ဂြိုဟ်ရန်ဒေါ်လာ ၁၅၀၀၀ ကျော်အကုန်အကျခံခဲ့သည်။ ၂၀၂၀၊ နို ၀ င်ဘာ ၁၄ ရက်နေ့တွင်သူတို့သည်ဂူများသန့်ရှင်းရေးအတွက်သွားသောအခါလီသည်ကန်၏သင်္ချိုင်းကိုမကြာသေးမီကတူး။ ပြန်မြှုပ်နှံခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ရဲကိုခေါ်ပြီးခေါင်းတလားကိုဖွင့်လိုက်တယ်၊ မုန်လာဥနီကြီးကလွဲလို့ဘာမှမရှာနိုင်ဘူး။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဒီဇင်ဘာလတွင် 10, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 10, 2020 GNAF	မှတ်ချက် Leave
Covid ရောဂါကူးစက်မှုသည်အွန်လိုင်းပေါ်မှချိန်းတွေ့ခြင်းအက်ပလီကေးရှင်းများအတွက်ကြီးမားသောအခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်လာသည့်တကယ့်ကမ္ဘာရှိလူမှုရေးဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုများစွာလျော့နည်းစေသည်။ သူတို့ဟာအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ရုံသာမကဒီခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာရှင်သန်ကြီးထွားလာတယ်။ သို့သော်ဖုန်း၏အခြားဘက်ခြမ်းတွင်မည်သူဖြစ်သည်ကိုသင်ဘယ်တော့မျှမသိပါ။ တရုတ်နိုင်ငံတွင်ယခုနှစ်တွင်အင်တာနက်လိမ်လည်မှုသည်၎င်း၏ဘဝကိုဆက်လက်ရှင်သန်နေသည်။
Pompeo - ဟောင်ကောင် CCP မှထိန်းချုပ်သောအခြားမြို့တစ်မြို့
ဒီဇင်ဘာလတွင် 9, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 9, 2020 Doris Mkwaya	မှတ်ချက် Leave
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီး Mike Pompeo မှစီးပွားရေးခေါင်းဆောင်များအားအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည်တရုတ်ပြည်မကြီးရှိအခြားမြို့များကဲ့သို့ဟောင်ကောင်နှင့်ဆက်ဆံလိမ့်မည်ဟုသတိပေးခဲ့သည်။ ဟောင်ကောင်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Carrie Lam ကဟောင်ကောင်၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးနှင့်ဘဏ္centerာရေးစင်တာအဖြစ်အဆင့်အတန်းသည်ပြောင်းလဲလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
Long Commute သည်“ Killing” အလုပ်သမားများဖြစ်သည်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဒီဇင်ဘာလတွင် 8, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 8, 2020 GNAF	မှတ်ချက် Leave
“ မနက်တိုင်းမြေအောက်ရထားပေါ်ရောက်တဲ့အခါကိုယ်ကျိုးစွန့်ဖို့စောင့်နေတဲ့လူသတ်ကားပေါ်ကဝက်လိုခံစားရတယ်။ ” Hu Yun သည်တစ်နေ့လျှင်သုံးနာရီကျော်အသွားအပြန်ရှိသည်။ ဘေဂျင်းမှာသူမဟာတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။
Alipay ၏အစီရင်ခံစာအရ ပေကျင်းသည်တရုတ်ပြည်၏နိုးထမှုအတွက်ရှေး ဦး မြို့တော်ဖြစ်သည်။ လူသန်းပေါင်းများစွာသည်အပြင်ဘက်မှောင်မိုက်နေသည့်အချိန်နံနက် ၅ နာရီတွင်ထပြီးပေကျင်းအလယ်သို့ပြေးထွက်သွားကြပြီးညတွင်ပြန်လာကြသည်။ ပေကျင်းရဲ့ဒီရေ အဲဒီမှာပျမ်းမျှခရီးသည်တစ်ဝက်မာရသွန်ထက်ကျော်လွန်။ “ ကုမ္ပဏီကိုရောက်ရုံနဲ့ငါ့ရဲ့စွမ်းအင်အားလုံးပျောက်ကွယ်သွားပြီ။ အချိန်ပိုဆိုတာဘာလဲ။ ငါအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါညသန်းခေါင်နီးပါးလောက်မှာလဲအိပ်ချင်တယ်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဒီဇင်ဘာလတွင် 6, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 5, 2020 GNAF	မှတ်ချက် Leave
ဒီဇင်ဘာလ4တွင် Beijing Dailyတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ဘေဂျင်းစည်ပင်သာယာကော်မတီ၏တရားဝင်သတင်းစာက Weibo သို့“ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ဖော်ပြသည်။Huabei ၌တည်ရှိသောလူငယ်မျိုးဆက်။ " လေ့လာမှုတစ်ခုအရ ၁၉၉၀ မှ ၁၉၉၉ အတွင်းတရုတ်နိုင်ငံတွင်မွေးဖွားသူပေါင်း ၁၇၅ သန်းရှိသည်။ ၎င်းတို့အနက် ၁၃.၄% ကသာကြွေးမြီများကိုရှောင်ကြဉ်သည်ဟုဆိုကြသည်။ ၈၆.၆% ကအကြွေးထုတ်ကုန်များကိုကြိုးစားကြသည်။ လူကြိုက်အများဆုံးမှာ Huabei နှင့် Jiebei ဖြစ်သည်။ Ant Group ၏ချေးငွေ ၀ န်ဆောင်မှုနှစ်ခုဖြစ်သည်။